Dongeng lutung kasarung dalam bahasa Igbo – qnc jelly gamat asli terbaik
Dongeng lutung kasarung dalam bahasa Igbo
Otu ụbọchị, Ya Ịdị ukwuu eze enyefe ocheeze na-Purba Sari Ayu Wangi. Otú ọ dị, n’ihi Purba Sari bụ nwata, mgbe ahụ jidesiri reins nke ala-eze Purba Rarang. Eze nọkwa na mgbe ahụ hapụrụ tụrụ mkpọrọ site na Eze Nwanyị Ukwu. N’ihi na ya ndakpọ olileanya, Purba Purba Sari Rarang nyere iwu bedang tee nwa na ozugbo chụgara oké ọhia nke Mt. Cupu Mandala.
Minda Tersebutlah Nna Ukwu n’eluigwe. N’otu abalị ọ rọrọ osobo a mara mma adaeze na Buana Pancatengah. Dị ka a n’ihi nna ukwu Minda ihe nke-adịghị mma, ọ nọ na-aga ibibi onye na-enwe.
Gwara Ageung ụgbụgbọ osisi akpa King, chọrọ iri enwe anụ. Purba Rarang ọsọsọp ọdọhọ Aki Panyumpit n’ihi enwe anụ àjà n’otu ụbọchị. Aki Panyumpit ozugbo ka oké ọhịa. Mgbe ọ fọrọ nke nta mgbede, ọ hụrụ a enwe na a osisi. Aki Panyumpit ihe a na anya, ọ na-enyo na enwe ike ịgwa ma jụọ wee welie dị ka nwatakịrị.
N’ezie ọ bụ incarnation nke Guru langur Minda. Aki mechara panyumpit langur anapụta ya n’ulo eze. Ọzọkwa, enwe na-enyefe ya n’aka eze. Ma enwe steepụ ala apụghị gbuo ya. Steepụ ala ozugbo nyeghachi ya onye Ancient Rarang langur. Otú ọ dị, Purba Rarang langur jụrụ ya ma na-anakwere ya Purba Sari.
Sari Purba anabata ya obi ụtọ langur. The enwe n’oge na-adịghị anya na ihe adaeze bụ ada na-achọ. Ọ na-rịọrọ Sunan Ambu, otú Purba Sari laghachi azụ. Ozugbo N’otu aka ahụ, Sari Purba azụ mbụ. Sari Purba mgbanwe ahụ ruru Purba Rarang. Iwe were ma nye iwu Purba Sari-eme ihe, na iyi egwu nke ọnwụ. Otu n’ime ndị a esiwe na Lubuk Sipatahunan n’otu ntabi anya. Purb Sari na-enyemaka nke nna ukwu Minda, mgbe irube isi n’iwu nke Otu n’ime oge. O mere ka Purba Rarang esiwanye iwe.
N’ikpeazụ, Sari Purba Purba Rarang aka ime ka ya n’anya karị. Purba Rarang ike na nke a oge ọ ga-emeri, n’ihi na ya onwe ya na enyi nwanyị, Indrajaya, bụ a uko. Otú ọ dị, gịnị banyere ikwu, ọ na-enyo langur incarnated dị ka a mara mma isi na ndị dike. Long akụkọ mkpụmkpụ, Sari Purba e dipersunting site Master Minda ha bie ndụ obi ụtọ.
Ugbu a ọ dị akụkọ ifo na nke West Java, Kasarung. The omume bụ na anyị nwere ike mabil n’akụkọ ifo n’elu bụ: “All n’obi da njehie nile, ọ gaghị agara on Kama nke ahụ ga-eduga nsogbu”.
Tulisan SebelumnyaDongeng lutung kasarung dalam bahasa Hmong
Tulisan SelanjutnyaDongeng lutung kasarung dalam bahasa Italia